VIRTUALBOX ANAGHỊ AHỤ NGWAỌRỤ USB - VIRTUALBOX - 2019
Usoro sistemụ Debian bụ otu n'ime nkesa mbụ ndị dabeere na Linux kernel. N'ihi nke a, usoro nhazi ahụ nye ọtụtụ ndị ọrụ nke kpebiri ịmara onwe ha na usoro ihe a nwere ike iyi ka mgbagwoju anya. Iji zere nsogbu ọ bụla n'oge ya, akwadoro ịgbaso ntuziaka ndị a ga-enye n'isiokwu a.
Hụkwa: Akara Linux na-ekesa
Wụnye Debian 9
Tupu ịmalite itinye Debian 9 ozugbo, ọ bara uru itinye ụfọdụ nkwadebe. Nke mbụ, lelee usoro ihe a chọrọ iji sistemụ arụmọrụ a. Ọ bụ ezie na ọ naghị achọ ihe gbasara ike kọmputa, iji zere incompatibility, ọ bara uru ileta ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ebe a kọwara ihe niile n'ụzọ zuru ezu. Kwadebekwa 4GB flash mbanye, n'ihi na enweghị ya ị gaghị enwe ike ịwụnye OS na kọmputa.
Lee kwa: Upgrading Debian 8 ruo version 9
Download Debian 9 dị mkpa naanị site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta, nke a ga-enye gị ohere izere itinye kọmputa na kọmputa gị na nje virus ma ọ bụ njehie dị njọ mgbe ị na-eji OS arụnyere.
Download Debian 9 OS ọhụrụ site na saịtị gọọmentị.
Gaa na nbudata ihe odide Os os na njikọ n'elu.
Pịa na njikọ "Foto ndị dị na CD / DVD Stable Release Stable".
Site na ndepụta nke foto CD, họrọ ụdị sistemụ arụmọrụ na-adọrọ gị mma.
Rịba ama: maka kọmputa nwere profaịlụ 64-bit, soro njikọ "amd64", na 32-bit - "i386".
Na peeji na-esote, gbadaa wee pịa njikọ ahụ na mgbati ahụ ISO.
Nke a ga-amalite ibudata oyiyi nke nkesa Debian 9. Mgbe emechachara, gaa n'ihu nzọụkwụ na ntụziaka a.
Nzọụkwụ 2: Gwu ihe oyiyi ahụ na mgbasa ozi
Inwe ihe oyiyi ebudatara na kọmputa gị, ịkwesịrị ịmepụta ya na kọmputa iji nweta kọmputa. Usoro nke ihe okike nwere ike ime ka ọtụtụ ihe isi ike nye onye ọrụ nkịtị, ya mere a na-atụ aro ka ị na-ezo aka na ntụziaka na weebụsaịtị anyị.
Gụkwuo: Na-ere Os os na Ngwa USB
Nzọụkwụ 3: Malite kọmputa site na windo mbanye
Mgbe ị nwere ngwa ọkụ na-eji ihe Debian 9 e dekọrọ na ya, ịkwesịrị ịtinye ya n'ọdụ ụgbọ mmiri ma malite na ya. Iji mee nke a, tinye BIOS ma mee ntọala ụfọdụ. O di nwute, ntụziaka zuru ụwa ọnụ, ma na weebụsaịtị anyị, ị nwere ike ịchọpụta ozi niile dị mkpa.
Ịhazi BIOS ka ị na-agba ọsọ site na windo mbanye
Chọpụta version BIOS
Nzọụkwụ 4: Malite ntinye
Echichi nke Debian 9 na-amalite site nchịkọta nhọrọ nke onyinyo ahụ, ebe ị chọrọ ozugbo ka ị pịa ihe ahụ "Na-ese onyinyo".
Mgbe nke a gasịrị na usoro nke usoro ihe ga-eme n'ọdịnihu, ịkwesịrị ime ihe ndị a:
Họrọ asụsụ nhazi. N'ime ndepụta, chọta asụsụ gị wee pịa "Nọgidenụ n'ihu". The isiokwu ga-ahọrọ asụsụ Russian, ị na-eme na uche gị.
Tinye ọnọdụ gị. Na ndabara, a na-enye gị nhọrọ site na otu ma ọ bụ karịa mba (dabere na asụsụ a họọrọ). Ọ bụrụ na edeghị ihe achọrọ, pịa ihe ahụ. "ndị ọzọ" ma họrọ ya site na ndepụta, wee pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Kọwaa njirimara keyboard. Site na ndepụta ahụ, họrọ asụsụ nke ọ ga-edeba na ndabara, wee pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Họrọ hotkeys, mgbe ịpịsị nke ya, asụsụ nhazi ga-agbanwe. Ihe niile dabere na ihe ị chọrọ - nke igodo ndị ọzọ dị mfe maka iji, ma họrọ ndị ahụ.
Chere maka usoro nbudata na ịbịnye ihe mgbakwunye usoro. Ị nwere ike ịgbaso ọganihu ahụ site na ilele akara ngosi kwekọrọ.
Tinye aha kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị ga-eji PC gị n'ụlọ, họrọ aha ọ bụla ma pịa bọtịnụ. "Nọgidenụ n'ihu".
Tinye aha ngalaba. Ị nwere ike ịkwụsị ọrụ a naanị site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Nọgidenụ n'ihu"ma ọ bụrụ na kọmputa ga-eji n'ụlọ.
Tinye paswọọdụ superuser, wee kwado ya. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na paswọọdụ nwere ike ịgụnye naanị otu agwa, mana ọ ka mma iji mgbagwoju anya ka ndị mmadụ na-enweghị ikike nwee ike ịmekọrịta na usoro ihe omume gị. Mgbe ịbanye na pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Ihe dị mkpa: ahapụla ala ahụ efu, ma ọ bụghị na ị gaghị enwe ike ịrụ ọrụ na ihe ndị dị na sistemụ ahụ nke chọrọ ikike superuser.
Tinye aha akaụntụ gị. Jide n'aka na icheta ya, n'ihi na mgbe ụfọdụ, ọ ga-abụ nbanye iji nweta ihe ndị dị na sistemụ ahụ nke chọrọ nnweta ikike.
Tinye paswọọdụ usoro ma kwenye ya, wee pịa "Nọgidenụ n'ihu". A ga-achọ ka ị banye na desktọọpụ.
Kpebie oge mpaghara.
Mgbe nke a gasịrị, a ga-ewere nhazi nhazi nke usoro ọdịnihu dị ka ihe zuru ezu. Onye nhazi ahụ ga-ebu ihe omume maka nkata diski ma gosipụta ya na ihuenyo.
Ihe na-esonụ bụ ọrụ aka na diski na akụkụ ya, nke chọrọ nyocha zuru ezu.
Nzọụkwụ 5: Ntọala Diski
Usoro ihe omume maka ịkọ nkwupụta ị ga-ekele gị site na nchịkọta nke ị ga - ahọrọ usoro nhazi. N'ime ihe niile, ị nwere ike ịhọrọ naanị abụọ: "Nchekwa onwe - jiri diski zuru ezu" ma "Ntuziaka". Ọ dị mkpa iji nyochaa nkọwa ọ bụla n'otu n'otu.
Mwepụ nke akpaaka akpaaka
Nhọrọ a zuru okè maka ndị ọrụ ahụ na-achọghị ịghọta ihe niile dị mgbagwoju anya nke diski disk. Mana ịhọrọ usoro a, ị kwenyere na a ga-ehichapụ ozi niile dị na diski ahụ. Ya mere, a na-atụ aro ka ị jiri ya ma ọ bụrụ na diski zuru ezu ma ọ bụ faịlụ na ya adịghị mkpa gị.
Ya mere, iji wepu diski na-akpaghị aka, mee ihe ndị a:
Họrọ "Nchekwa onwe - jiri diski zuru ezu" wee pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Site na ndepụta, họrọ disk ebe OS ga-arụnyere. Na nke a, ọ bụ naanị otu.
Kpebisie ike imepụta ihe. Nhọrọ ahụ ga-enye nhọrọ atọ. Ebumnuche niile nwere ike ịchọta atụmatụ niile. Ya mere, ịhọrọ ihe "Nkewa iche maka / n'ụlọ, / var na / tmp", ị ga-abụ ihe kacha echebe site na hacking si n'èzí. Maka onye ọrụ nkịtị, a na-atụ aro ịhọrọ ihe nke abụọ site na listi - "Nkewa nkewa maka / ụlọ".
Mgbe ị nyochachara ndepụta nke ngalaba ederede, họrọ akara "Mechie akara ma dee mgbanwe na diski" wee pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Mgbe usoro ndị a gasịrị, usoro nhazi ahụ ga-amalite, ozugbo o mechara, ị nwere ike ịmalite iji Debian 9. Ma mgbe ụfọdụ, nkwekọrịta disk diski adịghị adabara onye ọrụ ahụ, yabụ na ị ga-eme ya na aka.
Ntọala diski ntụziaka
Iji aka na-ekewa diski dị mma n'ihi na ị nwere ike ịmepụta akụkụ niile ị chọrọ ma hazie nke ọ bụla iji dabara mkpa gị. Iji mee nke a, mee ihe ndị a:
Ịnọ na windo "Usoro Mmasị"họrọ ahịrị "Ntuziaka" wee pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Họrọ mgbasa ozi nke Debian 9 si na listi ahụ.
Kwee ka e mepụta tebụl nke okpokoro site na ịtọgharị ọkụ "Ee" na ịpị bọtịnụ ahụ "Nọgidenụ n'ihu".
Rịba ama: ọ bụrụ na e kere akụkụ dị na diski ma ọ bụ na ị nwere sistemụ arụmọrụ nke abụọ arụnyere, windo a ga-agafe.
Mgbe e mepụtara tebụl nkebi ọhụrụ ahụ, ọ dị mkpa iji kpebie kpọmkwem akụkụ nke ị ga-emepụta. Ihe edere ga-enye ntụziaka nchịkọta nkọwa zuru oke na nchebe dị elu, nke dị mma maka ọtụtụ ndị ọrụ. N'okpuru ị nwere ike ịhụ ihe atụ nke nhọrọ nhọrọ ọzọ.
Họrọ ahịrị "Space Space" ma pịa bọtịnụ ahụ "Nọgidenụ n'ihu".
Họrọ na windo ohuru "Mepụta ngalaba ohuru".
Kọwaa ego nke ebe nchekwa ịchọrọ inyefe maka akụkụ nke usoro ahụ, wee pịa "Nọgidenụ n'ihu". A na-atụ aro ka ezipụta ọbụlagodi 15 GB.
Họrọ isi ụdị nkebi ohuru, ọ bụrụ na ị gbakwunye Debian 9 ị gaghị arụnye usoro sistemụ ndị ọzọ. Ma ọ bụghị, họrọ ezi uche.
Ka ịchọta mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ, họrọ "Malite" wee pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Tọọ ntọala mgbọrọgwụ site na iji ihe atụ na-egosi n'okpuru ebe a.
Họrọ ahịrị "Ịtọ ntọala ahụ karịrị" wee pịa "Nọgidenụ n'ihu".
E kere akụkụ mgbọrọgwụ, ugbu a mepee nkewa swap. Maka nke a:
Tinyegharịa isi ihe abụọ nke ntụziaka gara aga iji malite ịmepụta ngalaba ọhụrụ.
Kọwaa ọnụ ọgụgụ nke ebe nchekwa dị ka ọnụ ọgụgụ nke RAM gị.
Dị ka oge ikpeazụ, chọpụta ụdị nkewa dabere na ọnụọgụ anya nke ngalaba. Ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị anọ, họrọ "Ezi uche"ma ọ bụrụ na - "Isi".
Ọ bụrụ na ịhọrọ ụdị nke mbụ, na windo na-esote họrọ akara "Ọgwụgwụ".
Pịa bọtịnụ òké aka ekpe (LMB) ugboro abụọ. "Jiri dika".
Site na ndepụta, họrọ "Swap ngalaba".
Pịa na akara "Ịtọ ntọala ahụ karịrị" wee pịa "Nọgidenụ n'ihu".
E kerela mgbọrọgwụ na swap ngalaba, ọ na-anọgide na-eme ka a obibi nkebi. Iji mee nke a, soro ntuziaka n'okpuru:
Malite ịmepụta nkewa site na ịtọnye ohere niile fọdụrụ na ya ma chọpụta ụdị ya.
Debe ihe niile dị ka onyinyo dị n'okpuru.
Pịa LMB ugboro abụọ "Ịtọ ntọala ahụ karịrị".
Ugbu a, ohere niile dị na draịvụ gị kwesịrị itinye ya na nkewa. Na ihuenyo i kwesịrị ịhụ ihe dịka ihe ndị a:
N'okwu gị, ọnụ ọgụgụ nke ngalaba ọ bụla nwere ike ịdị iche.
Nke a mejupụtara nhazi disk, wee họrọ akara "Mechie akara ma dee mgbanwe na diski" wee pịa "Nọgidenụ n'ihu".
N'ihi ya, a ga-enye gị ọkwa zuru ezu banyere mgbanwe niile emere. Ọ bụrụ na ihe niile ya dabara na omume ndị gara aga, dozie mgbanwe ahụ "Ee" wee pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Nhọrọ nhọrọ nke nhọrọ nhichapụ ọzọ
E nyere ntụziaka dị n'elu n'elu ụzọ e si eche nchekwa nchekwa disk. Ị nwere ike iji ọzọ. Ugbu a, a ga-enwe nhọrọ abụọ.
Nchebe na-adịghị mma (zuru okè maka ndị na-amalite ịlụ bụ ndị chọrọ ịmalite ịma onwe ha na usoro ahụ):
nkebi # 1 - mgbọrọgwụ akụkụ (15 GB);
nkebi # 2 - nkewa nkeji (ego nke RAM).
Nchedo kachasị (dị mma maka ndị ọrụ na-eme atụmatụ iji OS dịka ihe nkesa):
ngalaba # 2 - / buut na oke ro (20 MB);
nkebi # 3 - nkewa nkewa (ego nke RAM);
ngalaba # 4 - / tmp na kwa afọ na-ekwu, nodev ma enweghị ihe ọ bụla (1-2 GB);
ngalaba # 5 - / val / log na oke enweghị ihe ọ bụla (500 MB);
ngalaba # 6 - / n'ụlọ na kwa afọ enweghị ihe ọ bụla ma nodev (ohere fọdụrụ).
Dịka ị pụrụ ịhụ, na nke abụọ, ịkwesịrị ịmepụta ọtụtụ akụkụ, mana mgbe ị wụnye sistemụ arụmọrụ, ị ga-ejide n'aka na ọ nweghị onye nwere ike ịbanye n'ime ya.
Ozugbo ị gụchara ntụziaka ndị gara aga, ntinye nke Debian 9 malitere. Usoro a nwere ike iwe ogologo oge.
Mgbe e mechachara, ị ga-achọ ịmepụta paradaịs ole na ole iji mezue usoro zuru ezu nke sistemụ arụmọrụ.
Na windo mbụ nke ntọala njikwa ngwugwu, họrọ "Ee", ma ọ bụrụ na ị nwere disk ọzọ na components nke usoro, ma ọ bụ pịa "Mba" ma pịa bọtịnụ ahụ "Nọgidenụ n'ihu".
Họrọ mba nke mirror nke usoro ebe nchekwa dị. Nke a dị mkpa iji hụ na nbudata ngwa ngwa nke usoro ihe ndị ọzọ na ngwanrọ.
Kpebie enyo nke Debian 9 archive. Nhọrọ kacha mma ga-abụ "ftp.ru.debian.org".
Rịba ama: ọ bụrụ na ịhọrọ obodo ọzọ dị na windo gara aga, mgbe ahụ kama kama ịsị "ru" na adreesị nke enyo, a ga-egosipụta koodu mpaghara ọzọ.
Pịa bọtịnụ ahụ "Nọgidenụ n'ihu", ma ọ bụrụ na ịgaghị eji ihe nnọchiteanya proxy, ma ọ bụ egosi na adreesị ya n'igbe kwesịrị ekwesị maka ntinye.
Chere maka usoro nbudata na ịwụnye mgbakwunye ngwanrọ na nghazi usoro.
Zaa ajụjụ ahụ ma ịchọrọ ka usoro ahụ zite ndị na-emepụta nkesa na nchịkọta na-emekarị maka nchịkọta kwa izu.
Họrọ site na ndetu nke ebe ihuenyo nke ịchọrọ ịhụ na usoro gị, yana ngwanrọ ọzọ. Mgbe ịhọrọ, pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Chere ruo mgbe a na-ebudata ma wụnye components ndị ahọrọ na windo mbụ.
Rịba ama: usoro ịmechaa ọrụ nwere ike ịdị ogologo - niile dabere na ọsọ nke ike Ịntanetị na nhazi gị.
Nye ikikere maka ntinye nke GRUB ka nnabata nnabata bu ihe site na ịhọrọ "Ee" na ịpị "Nọgidenụ n'ihu".
Site na ndepụta, họrọ ụgbọala ebe GRUB bootloader ga-emi odude. Ọ dị mkpa na ọ ga-adị n'otu diski nke arụnyere arụmọrụ.
Pịa bọtịnụ ahụ "Nọgidenụ n'ihu"ịmalitegharịa kọmputa wee malite iji Debian 9 nke ọhụrụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na ntinye nke usoro a zuru ezu. Mgbe ịmalitegharịrị PC ahụ, ị ​​ga-akpọrọ gị GRUB bootloader menu, nke ị chọrọ ịhọrọ OS ma pịa Tinye.
Mgbe ị rụchara ihe niile dị n'elu, ị ga-edebe desktọọpụ Debian 9. Ọ bụrụ na nke a emeghị, nyochaa ihe niile dị na ntuziaka nhazi ahụ ma ọ bụrụ na arụ ọrụ gị adịghị mma, gbalịa ịmalite usoro nwụnye os iji mezuo ihe a chọrọ.